Sida Loo Xalliyo Dhibaatooyinka – Somali Forum
“Idinku aad isu jeclaada, maxaa yeelay, jacaylku wuxuu qariyaa dembiyo faro badan.”—1 Butros 4:8
Bilowga guurkiinna waxaad la kulmi doontaan dhibaatooyin kala duwan. Dhibta waxay ka dhalan kartaa dareenkiinna iyo fekerkiinna iyo wax qabadkiinna aan isku midka ahayn. Ama waxay ka iman kartaa dibadda guurkiinna iyo dhacdooyin la filayn.
Waxaa kula fiicnaan karto inaad iska indhatirtid runta haddaba Kitaabka wuxuu nagula taliyaa inaanan ka cararin dhibaatooyinkeenna. (Matayos 5:23, 24) Markaad raacdid tacliinta Kitaabka ku jirta dhibaatada ku haysata xalka ugu fiican baad u heli doontaa.
1 DHIBTA JIRTA KA HADLA
KITAABKA WUXUU BARAA: Waxaa jira “wakhti la hadlo.” (Wacdiyahii 3:1, 7) Dhibta idin haysata waa inaad waqti ad ka hadashaan u sameysaan. Si daacad ah qofka kale ugu sheeg arrinta jirta sidaad ka dareemaysid iyo waxa ad ka qabtid. Mar walba ‘run kula hadal.’ (Efesos 4:25) Xitaa markaad cadhootid iska ilaali inaad dagaallantid. Jawaab qabow baa wadahadal ka celin karta inuu dagaal isku beddelo.—Maahmaahyadii 15:4; 26:20.
Xitaa haddii adan wax isku raacsanayn mar kasta hadalkaaga nimco ha lahaado oo jacayl iyo xushmad qofka kale u muuji. (Kolosay 4:6) Isku daya inaad arrinta sida ugu dhaqsi badan u xallisiin oo marna ha kala aammusinina.—Efesos 4:26.
Doorta waqti ad ka wadahadashaan dhibaatada
Markuu qofka kale hadlayo dhegeyso oo iska celi inaad hadalkiisa ka dhex geshid. Markaaga sug
2 IS DHEGEYSTA OO IS FAHMA
KITAABKA WUXUU BARAA: “Kalgacayl . . . isku wada jeclaada, midkiinba midka kale ha hor derejeeyo.” (Rooma 12:10) Habka ad qofka kale u dhegeysatid waa muhim. Idinkoo ‘isu naxariisanaya, oo is hoosaysiinaya’ ku dadaala inaad is afgaratiin. (1 Butros 3:8; Yacquub 1:19) Qof dhegeysanayo ha iska dhigin. Markay ku suurtoodo waxaad sameynaysid iska dhig oo ninkaaga ama naagtaada si fiican u dhegeyso. Haddii kale ka codso inaad hadhowdii wadahadashaan. Markaad qofka ad guursatay saaxiibkaaga camal u aragtid oo adan cadow u qaadan xanaaq ku ma degdegi doontid.—Wacdiyahii 7:9.
Maskax furan qofka kale ku dhegeyso xitaa markaad dhibsanaysid waxa lagu yiraahdo
Warka ka dambeeya waxa la sheegayo fahan. Ha dhegeysanin erayadooda keliya laakiin fiiri qaabka codkooda iyo jidhkooda
3 WAXAAD KU HESHIISEEN SAMEEYA
KITAABKA WUXUU BARAA: “Hawl kasta faaʼiidaa ku jirta, laakiinse hadalka bushimuhu wuxuu keenaa caydhnimo keliya.” (Maahmaahyadii 14:23) Ma idinku filna inaad xal wanaagsan ku heshiisaan keliya. Laakiin waa inaad sameysaan waxa ad ku heshiiseen. Tani waxay u baahnaan kartaa dadaal aad u badan laakiinse barako baa ka iman doonto. (Maahmaahyadii 10:4) “Abaalgud wanaagsan” baad hawshiinna ka heli doontaan haddii ad sidii koox isula wada shaqeysaan.—Wacdiyahii 4:9.
Sidaad u xallisaan dhibaatadiinna goʼaan ku gaara tallaabooyinka ad qaadan doontaan
Markii muddo la joogaba eega horumarkiinna
ISLA XALLIYA DHIBAATOOYINKA
Markii ad isla shaqeysiin guurkiinna ma ahaan doono mid daciif ah oo murugo badan laakiin wuxuu ahaan doonaa mid adag oo farxad leh. (Maahmaahyadii 24:3) Horay u eega mustaqbalka oo ha soo hadal qaadina dhibaatooyin hore oo laga soo wareegay. (Maahmaahyadii 17:9) Marka ad isla shaqeysaan oo ad hirgelisaan tacliimaha Kitaabka waad ku liibaani doontaan inaad xallisaan dhibaato kasta.
Maxay tahay dhibta ugu weyn aan rabo inaan kala hadlo ninkayga ama naagtayda?
Sidee baan u ogaan karaa qofka kale sida runta ah uu dhibta jirta ka dareemayo?
Previous: Hadaad Jeceshay Guul Iyo Hadaf Horumar Leh Aqriso 5- Qodob Uu Qofka Bini-Aadanka Isku Hormarin Karo.